ပညာရေးမှာထူးချွန်ပြီး သိတတ်လိမ္မာလွန်းတဲ့သမီး လေး ဖြစ်လာတာကြောင့် ၁၀နှစ်နီးပါးလုံး ကြိုးစားပြော ပြထိန်းကျောင်းပေးခဲ့ရကျိုးနပ်တယ် ဆိုတဲ့ စိုင်းလွှမ်း” – XB Media & News
ပညာရေးမှာထူးချွန်ပြီး သိတတ်လိမ္မာလွန်းတဲ့သမီး လေး ဖြစ်လာတာကြောင့် ၁၀နှစ်နီးပါးလုံး ကြိုးစားပြော ပြထိန်းကျောင်းပေးခဲ့ရကျိုးနပ်တယ် ဆိုတဲ့ စိုင်းလွှမ်း”
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ စိုင်းလွှမ်းအနုပညာလောကမှာ ထိုက်သင့်သလောက်ပရိသတ်တွေသိရှိထားတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ ။သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကတော့ အခုချိန်မှာSingleFatherအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တော် သမီးလေး စစ်လွန်းဝတီထက်ကိုစောင့် ရှောက်ကာ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေသူပါ။
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ စိုင်းလွှမ်းအနုပညာလောကမှာ ထိုက်သင့်သလောက်ပရိသတ်တွေသိရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး ကတော့ အခုချိန်မှာSingleFatherအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အချစ်တော် သမီးလေး စစ်လွန်းဝတီထက်ကို စောင့်ရှောက်ကာ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေသူပါ။
သူyoutubeကနေ ကြည့်ထားတာ တဲ့😅ဟုတ်သလိုပဲ အကြောတော့ပြန်ပေါ်လာပြီးသက်သာလာတာပဲ အဆူတော့ခံလိုက်ရတယ် 😁 ဒီလိုလေး မြင်ရဖို့ ဖြစ်ဖို့ အသိတရားဘာသာတရားကိုယ်ချင်စာတရား ရှိဖို့ သိဖို့ကြိုစားပြောပြဆုံးမပေးခဲ့သမျှ ၁၀နှစ်နီးပါးဆိုတဲ့ အချိန်ကာလက ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်းမသိအောင် ပါပဲ
ဒါပေမဲ့ အခု Report Card ကိုကြည့်ပြီး အောက်မှာရေးထားတဲ့ သမီးဆရာရဲ့ comment လေးကို ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ ပီတိဖြစ်ရတာက တော့ဘာနဲ့ မှ မတူတဲ့ ခံစားမှုပါမြန်မာစာမြန်မာစကားအတွက် သမီးကို စိတ်မပူတော့ပါ ဘူး…. ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သမီးလေးရဲ့ သိတတ် လိမ္မာမှုတွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း ဖခင်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေနဲ့ ယဥ်ကျေးလိမ္မာစွာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ စစ်လွန်း လေးကို ချစ်ရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ စိုင္းလႊမ္းအႏုပညာေလာကမွာ ထိုက္သင့္သေလာက္ပရိသတ္ေတြသိရွိထားတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ ။သူ႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာSingleFatherအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ သမီးေလး စစ္လြန္းဝတီထက္ကိုေစာင့္ ေရွာက္ကာ ဘဝကိုေအးခ်မ္းစြာျဖတ္သန္းေနသူပါ။
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ စိုင္းလႊမ္းအႏုပညာေလာကမွာ ထိုက္သင့္သေလာက္ပရိသတ္ေတြသိရွိထားတဲ့ သူတ စ္ေယာက္ပါ။ သူ႔ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရး ကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာSingleFatherအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ သမီးေလး စစ္လြန္းဝတီထက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ကာ ဘဝကိုေအးခ်မ္းစြာျဖတ္သန္းေနသူပါ။
သူyoutubeကေန ၾကည့္ထားတာ တဲ့😅ဟုတ္သလိုပဲ အေၾကာေတာ့ျပန္ေပၚလာၿပီးသက္သာလာတာပဲ အဆူေတာ့ခံလိုက္ရတယ္ 😁 ဒီလိုေလး ျမင္ရဖို႔ ျဖစ္ဖို႔ အသိတရားဘာသာတရားကိုယ္ခ်င္စာတရား ရွိဖို႔ သိဖို႔ႀကိဳစားေျပာျပဆုံးမေပးခဲ့သမွ် ၁၀ႏွစ္နီး ပါးဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကာလက ဘယ္လို ကုန္သြားမွန္းမသိေအာင္ ပါပဲ
ဒါေပမဲ့ အခု Report Card ကိုၾကည့္ၿပီး ေအာက္မွာေရးထားတဲ့ သမီးဆရာရဲ႕ comment ေလးကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ပီတိျဖစ္ရတာက ေတာ့ဘာနဲ႔ မွ မတူတဲ့ ခံစားမႈပါျမန္မာစာျမန္မာစကားအတြက္ သမီးကို စိတ္မပူေတာ့ပါ ဘူး…. ”ဆိုတဲ့စာေ လးနဲ႔သမီးေလးရဲ႕ သိတတ္ လိမၼာမႈေတြကိုေျပာျပခဲ့တာပါ။CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း ဖခင္ရဲ႕သြန္သင္ ဆုံးမမႈေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာစြာ ႀကီးျပင္းလာတဲ့ စစ္လြန္း ေလးကို ခ်စ္ရင္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Post Views: 20,931
တိုက်ခိုက်ဆဲဆိုပြီးရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဝေဖန်တဲ့သူတွေကြောင့် သည်းခံတတ်တဲ့ စိတ်တွေပိုတိုးလာပြီး သမာဓိ အားကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဘေဘီမောင်
တစုံတယောက်ကို ရည်ရွယ်ပီး ပရိသတ်ကြီး စိတ်ဝင်စား အောင်တင်လာပြန်တဲ့ကြော်ငြာဘုရင်မထက်ထက်မိုး ဦး